[OFISIALY] momba ny Dr.Fone - fitaovam, Valiny ary Ankehitriny
Reinvent tsara kokoa, miaraka.
dr.fone dia izao tontolo izao no voalohany manome tahirin-kevitra iOS sy Android fanarenana rindrambaiko angona sitrana, izay efa nanampy olona maro ireo.
Amin'ny 10+ taona ny traikefa eo amin'ny fanomezana ny olona ambony laharana faha-rindrambaiko sy ny services, Wondershare dr.fone efa nanolo-tena ho manompo 50 000 000+ mpampiasa. Wondersharers manana ary tsy hanadino ny teny fikasana sy mitandrina manampy mpanjifa mankafy fiainana nomerika mahafinaritra.
Manamboatra fitaovam for finday olana samihafa.
Mahomby valin'ireo fanontaniana finday isan-karazany.
Manam-pahaizana mba lavitra hanampy amin'ny finday rehetra ny olana.
Meet dr.fone ekipa
Hevitra no mora. Fampiharana dia sarotra.
Ireo no fototra olona izay mandeha kilaometatra ny fanampiny mba hahatonga ny traikefa tsy hay hadinoina eo amin'ny dr.fone iray!
manonofinofy toy Mpanorina
13+ Wondershare naorina.
Awards & tanana aminy
More ADwards & hevitra
Ny toerana tena manerana izao tontolo izao Mobile vahaolana
Ny fanaovana ny tsara indrindra mpamatsy finday vahaolana, dr.fone maso akaiky foana amin'ny mpampiasa zavatra ilaina, amin'ny alalan'ny vokatra tamberina, finday Q & A sehatra fiadian-kevitra sy ny sisa. Ny daty, ny olona rehetra maneran-tany no nametraka mihoatra ny 50.000.000 dr.fone fandaharana.
Nanomboka tamin'ny 2003, an-tapitrisany Wondershare rindrambaiko no nametraka.
Fisaorana manokana ho an-tapitrisany Nice Mpanjifa
dr.fone namonjy ny sary sy ny fahatsiarovana sarobidy, misaotra!
Misaotra betsaka noho ny fampahiratana ny very sary. Ireo sary an-tsoratra sarobidy fahatsiarovana rehetra amin'ny zanako vavy. Ianao irery no avy amin'ny toerana maro izay afaka manampy ahy ny very sary teo amin'ny iPhone 6s. Fotsiny aho dia tsy afaka misaotra ampy !!!
Ny mpivarotra avy any USA, NY
Noho dr.fone, dia mahazo indray ny fifandraisana rehetra teo amin'ny iPhone 6. Amin'ny maha-mpivarotra, fantatrareo, izany dia midika hoe fifandraisana be dia be ho ahy. Misaotra betsaka, dr.fone.
Media: marketing02 # wondershare.com (haino aman-jery ihany ny fifandraisana, hanoloana # miaraka @)
Partner: Selena # wondershare.cn (fandraharahana fanadihadiana ihany, hanoloana # miaraka @)
Fa manontany fanohanana tsidiho HERE
Te hitsangana ny raharaham-barotra? Contact us for more fahafaha